Healthcare Equipment Factory, Suppliers | China Healthcare Fitaovana Manufacturers
简体 中文 繁體 中文
Intensive Care & Fiainana Fanohanana
Valindrihana Supply Units
Zaza Phototherapy Incubators
Zaza Phototherapy Units
Teknika Navigation Systems
Safety niteraka Cabinets
Taona faha-II Type B2
CO2 / Tri-dranomaso Incubators
Water fanadiovana Systems
ASTM Type I Ultra rano madio
ASTM Type II Ultra rano madio
ASTM Type III Ultra rano madio
CAP / CLSI Type I ambony rano madio
Pure rano fitsaboana fampiharana
Pure rano ho an'ny biby fisotroan
PCR mafana Cyclers
Miaina Therapeutic fitaovana
Download Center sy Technical Documents
Ministeran'ny Fahasalamana Of Zambia pitsaboana Mpiandraikitra 'fitsidihana mba sitrano Force for 3 lehibe hopitaly tetikasa
Ny Quality nizahany toetra indray ny fitsapana eo amin'ny Biosafety Cabinet
Famokarana & Quality
Rano jacketed CO2 Incubator
Contact ny ekipa
Sitrano Force Bio-meditech Holdings Voafetra
Ampiana hoe: 6788 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai 201706, Sina
Contact olona: Mr. Bill shom
Home » Products » Healthcare Fitaovana
Prince-100B Series mampiasa OLED / STN lamba, SpO2 sy ny fitepon'ny dia azo vakiana avy amin'ny zoro lehibe kokoa hatramin'ny 170 ambaratonga, ary afa-tsy, ny varavarana lamba dia azo ahodina ao amin'ny 2 na 4 ny toro-lalana. Anti-mihetsika fanampiny teknolojia manao Prince-100B Series tranon'omby amin'ny toe-javatra izay fanamby toy ny marary manana aretina Parkinson.
Fingertip Pulse Oximeter - Prince-100B
Io modely vaovao no niakatra-to-daty dikan-Prince-100B series.And dia mizara ny ankamaroan'ireo vatosoa ao amin'ny andian-dahatsoratra 100B. Saingy ihany
izany modely no afaka ny ho rano-porofo, fianjerana-porofo sy dona-porofo. Na dia tsy nahy Mitete izany, raha ranon rano izany, na raha ny rantsan mihorohoro raha hatao fitiliana, dia mbola afaka mihazakazaka tsara.
Tena ny tsara indrindra fingertip oximeter hatramin'izao.
Oxisensor dia avo-marina SpO2 fangadiana amin'ny faritra Integrated oxygène fandrefesana.
Easy ECG Monitor - PC-80A (Bluetooth 4.0)
Izany Easy ECG Monitor dia natao ho fandrefesana sy ny fanoratana ireny ECG waveform sy ny eo ho eo ny fo ny olon-dehibe tahan'ny marary. Tsy
azo ampiharina eo amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny fampiasana sy ny tokantrano ary mety miasa ny marary ny tenany.
Fitsaboina momba ny biby Oximeter - Prince-100V
Azo fitaovana amin'ny Sela Mpandray Hafanana ao anatin'izany isan-karazany rehetra izao
adapters ho an'ny isan-karazany famarana toerana, toy ny rantsan, tongotra, tongotra
sy ny rantsan-tongony.
Hato-Pulse Oximeter - Prince-100H (Bluet ...
Ny Wrist Oximeter dia natao ho ampiasaina amin'ny hopitaly, ireo
mpitsabo sy fiaraha-monina ao an-trano. Zava-misy sy
mety aminao hanara-maso SpO2 in maharitra raha
matory na amin'ny asa isan'andro hafa niara-
Io no vokatra azo ampiharina ho an'ny montioring SpO2 sy PR.
12345Manaraka> >> Page 1/5
Copyright © 2017 Sitrano Force. Zo rehetra voatokana.